तपाईंको वेबसाइटको लागि उत्तम ब्याकलिंक रणनीति कसरी बनाउने?
यो लेख सबैभन्दा प्रायः सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ "" कसरी वेबसाइटमा पछाडि राख्ने? "मा एक लेख खोज्न डिजाइन गरिएको छ। धेरै लिङ्क निर्माण रणनीतिहरूले हामीलाई अन्य स्थान सम्बन्धित साइटहरूको लागि लिंक सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।. यद्यपि, तिनीहरू सबैलाई जैविक भनिदैनन्. वास्तवमा, त्यहाँ एकल, अन्तिम लिंक इमारत रणनीति छैन जुन केवल जैविक विधिमा आधारित छ. केहि वेबसाइटहरूको लागि, एक रणनीतिले सकारात्मक एसईओ परिणाम दिन सक्छ र राम्रो लिङ्क निर्माण अवसर प्रदान गर्न सक्छ. अरूको लागि एउटै दृष्टिकोणमा कुनै मान्य वा भित्री मूल्यको प्रतिष्ठा पनि देखा पर्न सक्छ.
बितिसकेको बेला, विभिन्न लिङ्क निर्माण रणनीतिहरु लाई अधिक वा कम कुशल को रूप मा उलझन गर्छन. केहि लिङ्क उत्पन्न प्रविधि केही समयको लागि राम्ररी काम गर्न सक्छन्, र त्यसपछि प्रयोगकर्ता रवैया परिवर्तन सुरु हुन्छ र तपाईंको रणनीति परिवर्तन हुन सक्छ.
तपाइँको लिंक बिल्डिंग रणनीति को योजना कसरि गर्ने?
तपाईंको लिङ्क बिल्डिंग रणनीति बनाउन को लागी, तपाईंलाई विभिन्न रणनीति को लागि विशेष रूप देखि तपाईंको बजार आला मा देखने को आवश्यकता हो. तपाईंको अनलाइन व्यापार को लागी सबै भन्दा राम्रो काम गर्नेहरू बुझ्न सबै को जाँच गर्नुहोस्. कुन कामका साथ जानुहोस् र नयाँ विचारहरू पनि प्रयास गर्नुहोस्. यो सँधै खाना हो कि लिङ्क बिल्डिंग रणनीतिहरु जित्न को लागी तपाईले अधिक प्राकृतिक लिंक प्रोफाईल सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ. डिजिटल बजार निरन्तर रूपमा परिवर्तनयोग्य क्षेत्र हो, यो नयाँ तरिकाहरू प्रयास गर्न उचित हुनेछ.
लिङ्क निर्माण कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्ने खतरनाक किन किन खतरनाक छ?
आजकल, त्यहाँ टन लिंक निर्माण कार्यक्रमहरू छन् जुन केवल तपाईंको पैसा बाहिर पम्प गर्न डिजाइन गरिएको छ. तिनीहरू वेबमास्टर्सहरूलाई सघाउँछन् हजारौं ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्नका लागि उच्च प्राधिकरण साइटहरूबाट छोटो अवधिमा. जो लोग खोज इन्जिन अनुकूलन क्षेत्र मा अनुभव गरेको छ भनेर जान्दछ कि यो केवल सम्भव छैन र सत्य हुन पनि राम्रो लाग््छ. वास्तवमा, लिंक इजाजत गर्ने प्रक्रियाले महिना लाग्छ र धेरै मेहनत चाहिन्छ. यहाँ सम्म कि स्प्यामी लिङ्क इमारत योजनाले काम गर्दछ, अहिलेसम्म, Google ले सम्भवतः यो पत्ता लगाउँदछ र devalue हुनेछ, वा अझ पनि खराब कर्जाको साथमा तपाइँको साइटलाई दण्ड दिनेछ।. यसैले तपाईंलाई यस्तो योजनाहरू र फोकनिक लिङ्क निर्माण रणनीतिमा फोकस गर्न जरुरी छ.
कार्बनिक ब्याकलिङ्कहरू आवश्यक छन्!
प्राकृतिक पछाडि लिंकहरू जुन लिंकहरू छन् जुन तपाइँले तपाइँको साइटको लिङ्क राख्ने बिना कसैलाई सोध्नुहुन्छ. एक नियमको रूपमा, तपाई बिना यो जानकारी बिना लिङ्क पाउनुहुन्छ. यो धेरै सजिलो काम गर्दछ. उदाहरणको लागि, तपाईले मनपराउनु भएको एउटा लेख फेला पार्नु र तपाईंको साइटमा यसलाई लिङ्क गर्नुहोस्. तपाइँ सचेत हुनुपर्दछ कि गुगलले प्राकृतिक लिङ्कहरू र इनाम वेबसाइटहरू मनपर्छ जुन खोजी परिणाम पृष्ठमा उच्च श्रेणीको साथ उत्पन्न गर्दछ. यसकारण यो प्रकारको लिंक सुरक्षित छ. तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू Google द्वारा कहिल्यै भक्ति छैन.
लिङ्क इमारत आफैंले काम गर्दछ
प्रत्येक वेबसाईटको मालिकले लिङ्क निर्माण रणनीतिको लागि हेर्छ जुन उसको विशेष ध्यान बिना काम गर्न सक्छ।. यदि तपाइँ एक रणनीति खोज्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईंको निरन्तर कार्य प्रत्येक लिंक प्राप्त गर्न आवश्यक छैन, ब्लगिंग तपाईंको लागि शुभ अवसर हो. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुरा हो तपाइँको उद्योग विषयको आधारमा एक ब्लग बनाउन र निरन्तर रूपमा संलग्न संलग्नहरू पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयोगी हुनेछ. यदि तपाइँ फायदेमंद सामग्रीको साथ प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भने, उनीहरूले तपाईंको लेखसँग जोड लिनेछन् र तपाईंको साइटमा अधिक र अधिक कार्बनिक लिङ्कहरू सिर्जना गर्नेछन् Source .